बाँया बनाम दाँया विचारधारा, किन तपाईं पट्टि हुनुहुन्छ भनेर परिभाषित गर्न असम्भव छ? - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: सियुदाद डेल एस्टेमा किनमेल गर्न लायक छ? - पराग्वे
अर्को पोस्ट: एक ब्राजिलियन संग साक्षात्कार, एक विनिमय को अनुभव कस्तो छ? - फायरन्ज - इटाली
पोष्ट गरिएको2सप्ताह पहिले द्वारा रोमोमो लुकाना
ब्राजिलमा हालसालै एउटा कथित वैचारिक युद्धको बारेमा धेरै कुरा भएको छ, "धेरै दायाँ" लाग्ने बिरूद्ध "बढी दायाँ" लाग्ने मानिसहरु बीच। तर के तपाईंलाई थाहा छ यी सर्तहरूको अर्थ के हो?
हामी सुरू गर्नु अघि, यी सर्तहरू कहाँबाट आएका थिए हेरौं।
बाँया र दायाँको उत्पत्ति।
१ 18 औं (१ XNUMX औं) शताब्दीमा त्यहाँ राजा र रानीहरू थिए। र तिनीहरू सार्वभौम थिए, र उनीहरूको वचन व्यवस्था थियो। एक राजाको शब्द संघीय संविधान भन्दा बढी मूल्य थियो। हो, तिनीहरूले करहरू लगाए, र जब राजाले कर कम हो भनेर सोधे तब उनले केवल यसो भने: उनीहरूले थप करहरू छोप्छन्! र त्यसपछि, थप करहरू लगाइयो। र यदि तपाईंले तिर्नु भएन भने, तपाईं मर्नुहुनेछ। शाब्दिक रूपमा, करहरू तिर्दा एक जनाको मृत्यु भयो। वास्तवमा भन्ने हो, यो शब्द हो जहाँबाट कर आउँछ। "राजाले लगाएको श्रद्धांजलि"। तपाईंसँग भुक्तान गर्ने वा भुक्तान गर्ने विकल्प छैन, यो तपाइँलाई भुक्तानी गर्नको लागि लागू गरिएको छ।
तर त्यहाँ केही व्यक्तिहरू थिए जसले राजाको आदेश र अनावश्यक कुरा मन पराउँदैनथे। तिनीहरूले आफूलाई उदार भन्ने गर्थे। उदारवादी = बढी सरकारी स्वतन्त्रता। (तिनीहरूले राम्रो काम गर्न राजाको शक्ति सीमित गर्नुपर्दछ)।
तर हरेक राजाका साथीहरू छन्, हैन ?! राजाका साथीहरूले त्यो बेकारको हो भन्ठाने। तपाईको मतलब के हो, यी उदारहरूले केहि अधिकार चाहान्छन्? राजाको शब्द व्यवस्था हो र सबैले कानूनको पालना गर्नुपर्दछ। यसलाई यत्तिकै छोड्नु राम्रो हो, परम्पराहरू राम्रो छन्, चीजहरू सधैं यस प्रकारले काम गर्दछन्, र यो उत्तम छ कि तिनीहरूले कार्य गरिरहनुपर्दछ, अन्यथा यो राज्य प्यान्डमोनियम हुनेछ। यी मानिसहरूलाई परम्परावादी भनिन्थ्यो। तिनीहरू राजाको परम्परा र शक्ति जोगाउन चाहन्थे।
त्यसोभए अब एउटा टेबलको कल्पना गर्नुहोस्। जहाँ राजा केन्द्रमा हुनुहुन्छ। कन्जर्वेटिभहरू उनीहरूको दायाँमा बसे। र यसको बायाँपट्टि लिबरलहरू बसे।
अनि त्यसपछि राजा मारिए! वास्तवमै हत्या गरियो। र अब यी व्यक्तिहरूले एक अर्कासँग समाधान खोज्न कुराकानी गर्नुपर्नेछ। बाँया पट्टि उदारहरू थिए। यस समूहमा हामीले एउटा केक राख्यौं: कार्यकर्ता र उद्यमी, नवप्रवर्तक र आदि (बुर्जुवा)
दायाँपट्टि हामीले एउटा केक पनि हालेका थियौं: राजाका साथीहरू, पादरीहरू (चर्च) र कुलीनहरू (कुलीनहरू), उनीहरू आफैंलाई त्यस्तै राख्न चाहन्थे। (अवश्य पनि, उनीहरूको प्रतिष्ठा थियो)। तर अब उनीहरूसँग राजा थिएन र संसदमा वार्ता गर्नु पर्ने थियो। अझै उही समूहहरू दायाँ र बायाँपट्टि बसे।
कसलाई थाहा थियो कि एक दिन हामीले व्यापारी र कामदारहरूलाई एकै पट्टि देख्यौं र रूढीवादीहरूसँग लडिरहेछौं?
यो भन्न सकिन्छ कि समयको साथ उदारहरूले कट्टरपन्थीहरु भन्दा धेरै लडाईहरु जितेका छन्। यस कारणले हामी पूँजीवादमा आए।
त्यसोभए अब त्यो समूह जुन सबै बाँया विभाजित हुने गर्थ्यो र नयाँ आर्थिक अभिनेताहरूसँग अर्को विषयवस्तु शुरू गर्‍यो। नयाँ दायाँ र बायाँ
लाइनको बाँया पट्टि अर्को पट्टि कामदारहरू थिए। कि तिनीहरूले नयाँ दायाँ पक्षसँग कुराकानी गर्नुपर्‍यो। तिनीहरू राम्रो काम गर्ने परिस्थिति चाहन्थे, थोरै थकाउने यात्रा। राम्रो उपकरण, श्वसन उपकरण, (पीपीई) आदि।
लाइनको दायाँ तिर, अब त्यहाँ कारखाना मालिक र व्यापारीहरू थिए। कारण: "चीजहरू जस्तो छन् त्यस्तै राख्नुहोस्"। यो उनीहरूको लागि कम लागतमा उच्च उत्पादन लाभको लागि ठूलो थियो।
त्यसैले यसको बीचमा हामीसँग अन्य विचारहरू र अन्य अभिनेताहरू छन् जुन समयसँगै युनियनहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू (नियामकहरू), व्यवसाय प्रतिस्पर्धीहरू हुन् र त्यसैले हामी कहिलेकाँही दायाँबाट बायाँ जान्छौं, कहिलेकाँही अन्य समयमा। अब जो बायाँ पट्टि दायाँ जान्छ, अब जो दाहिने पट्टि बाँया जान्छ।
र यसरी प्रत्येक नयाँ आर्थिक मुद्दाहरू सँगै, नयाँ अभिनेताहरू प्रवेश गर्दछ र नयाँ विचारहरू यस सर्कलमा प्रवेश गर्दछन्।
त्यसैले मँ भन्छु कि यो परिभाषित गर्न असम्भव छ जहाँ तपाईं र कुन पक्षमा हुनुहुन्छ। किनकि यो तपाईंको दृष्टिकोणमा, तपाई कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विन्दुमा निर्भर गर्दछ, र कुन विन्दुमा तपाईं टाइमलाइनमा हुनुहुन्थ्यो। उदाहरण को लागी, यस छोटो पाठमा मात्र व्यापारी बायाँ पट्टि भएको छ, त्यसपछि दायाँ खोल्छ, र कसले उसलाई हेर्छ उसको आधारमा ऊ केन्द्रमा हुन सक्छ! (एक प्रतिस्पर्धी र एक कामदार बीच जहाँ प्रतिस्पर्धी आफ्नो कम्पनी ले पहिलो उद्यमी कामदारलाई हेराई गर्दैछ)।
र यहाँ मैले अर्थव्यवस्थाको रेखामा पुग्न कोशिश गरें जुन पहिले नै धेरै प्रश्नहरू छन्! कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईं सामाजिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारहरू मिश्रण गर्नुहुन्छ भने, यो एक गडबड हुनेछ।
एक संक्षिप्त सारांशमा, म (आज) भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईं अर्थव्यवस्थामा ठूलो राज्य हस्तक्षेपको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईं वामपन्थी (पूर्व रुढिवादी १th औं शताब्दी) को पक्षमा हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईंलाई लाग्छ कि सरकार (राज्य) ले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन। र उद्यमीहरू र कामदारहरूलाई एक्लै छोड्नुहोस् तपाईं सहि बढी हुनुहुन्छ। (पहिले १ the औं शताब्दीमा यो उदार हुनेछ)।
अब, कोरोनाभाइरस देखा पर्छ! त्यसोभए धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो बिचार बदलेका छन् र सोच्दछन् कि हो, राज्यले अर्थव्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ र कम सक्षम भएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ, त्यसैले उक्त व्यक्तिले पहिल्यै कन्जर्भावाद (बायाँ) मा परिवर्तन गरिसकेका छ, र त्यो समय यही समयमा। सरकारले भनिरहेछ कि यसले अब उप्रान्त कार्य गर्दैन, यो थोरै पकड हो। काममा फिर्ता जानुहोस्, सबैलाई र मलाई एक्लै छोड्नुहोस्!
अर्को शब्दमा, सरकार आफैं लाइनको दायाँ पट्टि गइरहेको छ। (यसले न्यूनतम राज्य वाणीसँग अर्थ राख्छ)। तर ऊ राज्य (सरकार) को पद ग्रहण गर्छ र भन्छ कि कसरी मास्क, COVID-१ of को परीक्षण र क्लोरोक्वाइनको उत्पादन बढाउन वितरण गरिनेछ। त्यसोभए सरकार बायाँ लाइनमा सर्छ र हामीसँग अधिक मध्यस्थ राज्य हुन्छ! अनी तिमीलाई कस्तो छ? बायाँ र दायाँको त्यो परिभाषा परित्याग गर्नुहोस् जुन आज धेरैको लागि उपयोगी छैन!
र यो सामान्य हो र स्वस्थ पनि हो कि समयको साथ आफ्नो मन परिवर्तन गर्न तपाई चिन्तित हुनुभयो कि तपाई बायाँ वा दायाँ हो।
र यहाँ म एउटा सानो इतिहास ल्याएको छु भन्ने आशामा यो छलफल अन्त्य गर्छु र पाठकलाई लाग्छ कि उसको बाहेक अरु मान्य विचारहरु पनि छन् जुन मान्य छ! यसको नाम विविधता हो। यदि तपाईं व्याख्या मनपराउँनुभयो र यस ब्लग मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई दायाँ रातो बटनमा हामीलाई पछ्याउन आग्रह गर्दछु।
- जी, सहि रातो रमुलुको साथ, त्यसैले तपाईं पहिले नै अपील गर्दै हुनुहुन्छ! (यो किनभने म दुबै हो, त्यसैले मेरो लागि यो धेरै हेरचाह गर्दैन
र यदि तपाईं अझै थोरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने, एकदम स्पष्टीकरणात्मक भिडियो अनुसरण गर्नुहोस् जुन मैले यूट्यूबमा प्लानो पाइलटो च्यानलमा फेला पारे। यसरी राम्रो गरीयो कि मैले यसलाई स्क्र्याचबाट भिडियो बनाउनको सट्टा साझेदारी गर्दैछु।
इतिहास रूढिवादी दायाँ बाँया स्थिति सरकार उदार